UKUSETYENZISWA KWEKHAYA ISICWANGCISO SOKWENZA ISICWANGCISO SOKWENZIWA KWENKONZO YASEKHAYA Abavelisi, abaxhasi
Ekhaya Sebenzisa iMoto encinci yeHifu RF Ukususa ubuso ukuPhakamisa uLusu lokuhlaziya ubuNobuhle HF101
I-HIFU ithiyori: Sebenzisa amandla aphezulu e-ultrasound egxile kwindawo yonyango, ukuze izicwili zolusu zenze i-thermal, kwaye zenze iiseli ezikhuphayo ezikhawulezayo ukukhuthaza i-collagen.
I-36pcs isibane 650nm diode laser Lipo Laser Pads Liposuction Beauty Slimming Equipment for Weight Loss DB02
I-Laser yokunciphisa amafutha, sebenzisa i-laser eyi-650nm ethambileyo ukutshabalalisa iiseli ezinamanqatha anzulu, waqhekeza inwebu yeseli, utshintshe itaf kwi-triglyceride, emva koko ushiye umzimba.
I-Ultrasonic EMS Umatshini wokuphinda uhlaziye ulusu lwe-Therapy ye-Unyango yokuSusa iMfucumfucu kwisixhobo soSetyenziso lweKhaya ML02
I-MIMI ye-LED Photo Photon Therapy Isixhobo sobuso esidibanisa i-RF / EMS / Ubushushu / ukungcangcazela / ukukhanya kwe-LED.
I-Korean Ultrasonic Mini Hifu Skin Rejuvenation Face Ukuphakamisa ukuSusa imibimbi Ukusetyenziswa kweKhaya HF119
I-HF119 isebenzisa ubuchwephesha obuphezulu besenzo sobuchwephesha kwindawo yonyango, ke izicwili zolusu zenza i-thermal kwaye yenza iiseli ezikhubekayo ezikhawulezayo ukukhuthaza i-collagen yolusu.
Umatshini oShicilela uMatshini oCofayo uBelly Fat Iseli yokuSusa amaNqanaba amaTyhini amaNqatha eCraze Pad Sebenzisa iBD03
Lo matshini unciphayo uthathe ithuba lokunganyamezeli ukubanda kwe-triglyceride, ukunyibilikisa izicwili ezinamanqatha ngamandla angabandiyo ngokuchanekileyo.
Ukhathalelo lolusu lwe-Ultimate RF Ukuphakamisa ubuso kukhokelele ekuqiniseni ulusu nge-VL8
I-RF -Radio Frequency -isixhobo esiqinisa ulusu sinokufikelela kwisikhumba sakho kwaye sisuse ngokufanelekileyo iifolokhwe ze-nasolabial, imibimbi yebunzi, imibimbi yentamo kunye nemibimbi yamehlo. Amandla e-RF afika kwiderm,